Isii n'ime obodo iri kacha mma n'ụwa ịkwaga dị na USA
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Isii n'ime obodo iri kacha mma n'ụwa ịkwaga dị na USA
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • culinary • omenala • Education • Entertainment • Akụkọ Ejiji • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Egwuregwu • Sustainability News • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Isii n'ime obodo iri kacha mma n'ụwa ịkwaga dị na USA.
Ọmụmụ ihe ahụ tụlere ihe ndị a na-echekarị mgbe a na-ekpebi ebe a ga-akwaga, gụnyere ọnụ ahịa ụlọ, ọnụ ahịa obibi, ụgwọ ọnwa, ọnọdụ ihu igwe, ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọsọ ịntanetị na ndụ ndụ.
Ebe mbugharị kachasị ọnụ bụ Istanbul, Turkey ebe nkezi ọnụ ahịa obibi kwa afọ bụ naanị $17,124.
Basel, Switzerland bụ obodo kachasị ọnụ maka ịkwaga ebe ọ bụ na ọnụ ahịa obibi kwa afọ bụ $72,169.
Dubai bụ ebe mbugharị kacha mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwaga maka ihu igwe ka mma, ebe ọ meriri 10 zuru oke.
New nnyocha nwere kpughere ebe kacha mma n'ụwa ịkwaga, yana obodo isii USA nọ n'ọkwa 10 kacha elu.
Austin, Texas na-akpọ nọmba otu ebe ịkwaga, na Charleston na Los Angeles nakwa ọkwa nke ise kacha elu.
Ebe iri kacha elu ịkwaga na ụwa
n'usoro mmetụta Nkezi okpomọkụ (°C) Ọnụ ego ụlọ kwa m2 Nkezi ụgwọ ọnwa kwa ọnwa Ọnụ ego obibi kwa ọnwa (ezinụlọ mmadụ anọ) Ọnụọgụ nke ụlọ nri Ọnụọgụ oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Ọsọ ịntanetị (Mbps) Oge ndu Akara / 10
Obodo kacha mma n'ụwa ịkwaga bụ Austin, TX, USA. Austin nwere ọsọ ịntanetị nke atọ kachasị mma nke obodo ọ bụla na ọkwa, na 87.5 Mbps. Na mgbakwunye, obodo ahụ nwere akara nke ukwuu n'ihe gbasara nkezi okpomọkụ (20.4°C), yana ụgwọ ọnwa dị elu na $5,350.
Ọ bụrụ na ị na-eche maka ịkwaga n'èzí USA, obodo nke abụọ kacha nwee akara bụ Tokyo na Japan. Tokyo nwere akara nke ọma maka ọnụ ọgụgụ ụlọ nri ya na oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'elu nke a, ọ nwere ogologo ndụ ndụ kachasị mma, yana ndị bi na-ebi 84.
Charleston, South Carolina bụ obodo nke atọ kacha mma ịkwaga n'ụwa. Otu ihe ọ gafere na ya bụ ọsọ ịntanetị, nkezi bụ 106.5 Mbps, nke pụtara na ọ bụ nke kachasị ọsọ n'obodo ọ bụla na ndepụta ahụ.
N'agbanyeghị aha ya bụ ebe 9 kachasị mma ịkwaga na San Francisco, a chọpụtakwara na ọ bụ obodo nke isii kachasị ọnụ ahịa ịkwaga n'ụwa, na-esote New York na nke ise. Ọnụ ego obibi ndụ na San Francisco kwa afọ bụ $6, ebe ọnụ ahịa obibi na New York bụ $5.
Ọ bụrụ na ịkwaga n'ụsọ oké osimiri bụ ihe ịma aka gị, Daytona Beach bụ ebe kachasị mma ịkwaga na USA na 6th ebe kacha mma ịkwaga n'ụwa, Miami na-esote ya.
Basel, Switzerland bụ obodo kachasị ọnụ ahịa ịkwaga ebe ọ bụ na ọnụ ahịa obibi kwa afọ bụ $72,169, nke karịrị $33,568 karịa kwa afọ karịa nkezi ọnụ ahịa obibi kwa afọ nke $38,558.
Ebe mbugharị kachasị ọnụ bụ Istanbul ebe nkezi ọnụ ahịa obibi kwa afọ bụ naanị $17,124. Nke a bụ $55,045 obere kwa afọ karịa ịkwaga Basel, yana $21,434 na-erughị nkezi.
Dubai bụ ebe kacha mma ịkwaga ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwaga maka ihu igwe ka mma, n'ihi na ọ nwetara 10 zuru oke. Okpomọkụ dị na Dubai bụ 28.2 degrees Celsius, na e nwere 68mm nke mmiri ozuzo kwa afọ.
Obodo Qatari nke Doha bụ ebe mbugharị n'elu dị n'akụkụ oke osimiri, obodo a nwetara 7.53/10. Okpomọkụ mmiri na Doha dị ogo 24.83 na nkezi, ọ nwekwara ụgwọ ọrụ dị elu nke $55,096.
Michael Roberts ekwu, sị:
November 17, 2021 na 01: 10
Ejighị m n'aka onye mere nchọpụta a, mana na ahụmahụ m dị ka onye Australia na-akwagharị akwagharị bụ onye bi ná mba ọzọ ruo ọtụtụ afọ ọ bụ ihe efu zuru oke, na esemokwu na nyocha ọ bụla ọzọ m hụworo na isiokwu ahụ! N'ụzọ doro anya, ndị nchọpụta ahụ enyeghị SE Asia, Australia ma ọ bụ New Zealand nsogbu.